बीचमा अन्य छाला blemishes colloidal scars, वा भन्न सही हुनेछ - Keloid (ग्रीक शब्द "keleis" बाट - "ट्यूमर" र "eidos" - "समानता, प्रकार") - सबैभन्दा अप्रिय। तिनीहरूले मालिक शारीरिक र मनोवैज्ञानिक बेचैनी छुटकारा। Keloids - एक कठिन, बाहिर जोडले छाला खत को सतह माथि खडा वा खत नियमित आकार छैन र सामान्यतया समय संग बढ्छ। धेरै मानिसहरू शिक्षा गलत हटाउने कारण भनेर विश्वास postoperative sutures, तथापि, यति सरल छ।
मिति डाक्टर पूरा निश्चय किन गठन colloidal scars छैन। scars अन्य प्रजाति रूपमा, keloids कारण रूपमा furunculosis घाउ र बल्न, शल्य चिकित्सा सञ्चालन यस्तो रोग को निको, lupus, ठेउला गर्न उत्पन्न हुन सक्छ। तथापि, तिनीहरूले पनि घाउ को निको पछि समय उत्पन्न गर्न सक्छ वा spontaneously कुनै स्पष्ट कारण लागि undamaged छाला क्षेत्र मा गठन।
शोधकर्ताओं colloidal scars साधारण प्रकटीकरण को एक आनुवंशिक फारम या सेल को विकास र विभाजन मा परिवर्तन गरेर ट्रिगर, तर यी परिमार्जनहरू अझै पूर्णतया बुझे छैन फेला परेन। चिकित्सा तथ्याङ्क देखाउँछ कि छाला मा scars संग विरामीहरु को 10-20% - एक keloid खत को धारकों।
यो डाक्टर colloidal खत निर्धारण गर्न सक्षम थियो कि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। scars को फोटो हो साधारण, यो नेत्रहीन छाला दोष को सुरु र एक डाक्टर हेर्न समय निर्धारण प्रारम्भिक चरणमा रोगी मद्दत गर्छ। मिति, colloidal scars हटाउँदछ भन्ने विश्वव्यापी प्रविधी, प्रत्येक केही मामला व्यक्तिगत दृष्टिकोण आवश्यक अवस्थित छैन।
हाल आधार भेटी colloidal scars हटाउने, स्टेरयड को इंजेक्शन द्वारा छ। इंजेक्शन सामान्यतया समय keloids पङ्क्तिबद्ध जुन समयमा 3-4 हप्ता को लागि निर्धारित छन्, र आफ्नो विकास रोक्छ, तर पनि उपचार को एक आदर्श नतिजा को मामला मा उपस्थिति र संवेदनशीलता छाला स्वस्थ क्षेत्रहरूबाट विभिन्न एउटा ट्रयाक छ।
keloid scars को उपचार को अर्को प्रभावकारी विधि - एक तंग पट्टी को प्रयोग। यस मामला मा, दबाव रोगग्रस्त ऊतक कक्षहरूको वृद्धि रोक्छ, तर वर्षैभरि घडी वरिपरि पट्टी लगाउन इष्टतम प्रभाव आवश्यकता हासिल गर्न। साथै, उपचार को यो विधि 1 वर्ष भन्दा पुरानो भएको scars सामना गर्न सक्दैन।
लेजर पनि keloids सामना प्रभावकारी हुन मानिन्छ। को खत कम रातो र सतह माथि कम फैलएको बनाउन सम्भव छ। यसो गर्न, तपाईं धेरै उपचार सत्र मार्फत, प्राथमिकताको संयोजन मा एक तंग पट्टी, स्टेरयड वा सिलिकन प्लेट संग गर्नुपर्छ, यो कमजोरीको वशमा पऱ्यौं चेतावनी हुनेछ।
Cryotherapy एकदम भन्दा 1 वर्ष पहिले पहिलेको लागि खडा hypertrophic र keloid ऊतक प्रकार scars को घाउ प्रभावकारी हुन्छ। यो उपचार अक्सर प्रभाव क्षेत्र को darkening entails।
keloid scars लागि शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप उपचार दक्षता को दोस्रो लाइन र scars स्टेरयड इंजेक्शन तंग पट्टी वा जब lesion को ठूलो क्षेत्रहरु प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन लागि मुख्य रूप प्रयोग भएको छ। तिनीहरूले यस्तै वा ठूलो प्रकुपित सक्नुहुन्छ किनभने सञ्चालन, एकदम जोखिमपूर्ण छ keloid खत। Irradiation सर्जरी पछि आवश्यक छ।
स्थानीय सिलिकन प्याच वा जेल - यो keloid scars को एक एकदम नयाँ र अपेक्षाकृत पीडारहित हटाउने छ। प्रयोग सिलिकन वेफर्स keloid विकास गर्न खतरा भएका विरामीहरु मा घाउ निको निम्न तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ। जेल वा प्याच सारा दिन को लागि लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। उपचार 3-6 महिना रहन्छ।
केही शब्दहरू भन्नुभएको हुनुपर्छ सूर्य देखि सुरक्षा प्रभावित मान्छे, एक एसपीएफ उच्च डिग्री संग एक सनस्क्रीन प्रयोग गर्न यो मामला मा सबै भन्दा राम्रो, यो खत को उपस्थिति पछि6महिना एक दिन2पटक लागू गर्नुपर्छ।
दुर्भाग्यवश, कारण keloid को घटना र यस क्षेत्रमा अनुसन्धान को कमी को प्रकृति, माथि विधिहरू को कुनै पनि 100% कुनै पुनरावृत्ति ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन।
Sponzhik अनुहार के हो?
Cosmetology। शरीर Mesotherapy। समीक्षा
एक मस्तिष्क aneurysm के हो? मस्तिष्क Aneurysm: लक्षण, निदान
शुरुआती लागि मोती देखि हस्तशिल्प
जीवन र पूर्वी Slavs को मुख्य पेशा